ချစ်ကြည်အေး: မောဟမျဉ်းဖြောင့် တစ်ကြောင်း
Yan Mon Sep 10, 11:52:00 AM GMT+8
ဖတ်ပြီး ရင်ထဲမောသွားတယ်ပဲ ပြောရတော့မယ်...
ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက် ဖန်တီးသွားပုံလေးနဲ့ စကားအသုံးအနှုန်းလေးတွေ သေသပ်ပိရိတယ်. စာမူကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါပဲ မချစ်ကြည်အေးရေ.
Latt Latt Mon Sep 10, 04:23:00 PM GMT+8
ရေးထားတာ ကောင်းလိုက်တာ။"သိရင်တော့ ခွင့်လွှတ်နိူင်စရာပေမဲ့ အကြောင်းရင်းမှန်ကို မသိတဲ့အခါ လူတွေဟာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အထင်အမြင်တွေ တက်တက်စင်အောင် လွှဲသွားနိူင်တာ။" စကားကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။
မြသွေးနီ Mon Sep 10, 06:52:00 PM GMT+8
စာအုပ်ထဲမှာ ဖတ်ပြီးပေမယ့် အွန်လိုင်းမှာလည်း ထပ်ဖတ်သွားပါတယ်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ညီမ ဒီနေ့တင်ခဲ့တဲ့ စာမူလေးက အဲ့ဒီလိုပဲ အထင်လွဲတဲ့စိတ်အခြေခံကနေ ရေးဖြစ်ခဲ့တာ။ လူတိုင်းမှာ ကိစ္စတစ်ရပ် ဖြစ်လာဖို့ စေ့ဆော်တဲ့ အကြောင်းရင်းခံလေးတွေ ရှိနေနိုင်တယ်။ အဲ့ဒီအကြောင်းရင်းလေးတွေကို မသိသူက အပေါ်ယံအမြင်နဲ့ ဆုံးဖြတ် သတ်မှတ်မိတတ်ကြတယ်။ မသိခင်စပ်ကြားမှာ စိတ်အထင်နဲ့ ပြုမူဆက်ဆံ ပြောဆိုမိတတ်တာတွေက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကြား လွဲမှားတဲ့ နားလည်မှုတွေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်နော်...။
mstint Mon Sep 10, 08:26:00 PM GMT+8
ပုထုဇဉ် လူသားတိုင်းအတွက် အခြေအနေ တစ်ရပ်ရဲ့ လှုံ့ဆော်မှုပေါ် မူတည်ပြီး ဒေါသ လောဘ မောဟ မာန်မာနတရားတွေဟာ မထင်မှတ်ရင်မထင်မှတ်သလို ထိုးထွင်းဝင်ရောက်လာတတ်လေ့ရှိတာဟာ သဘာဝပါ မချစ်ရေ။ ဇာတ်အိမ်လေးကကို သဘာဝကျကျ တည်ဆောက်ထားသလို အရေးအသားတွေ သဘောကျတယ်။
Nyi Linn Thit Tue Sep 11, 08:06:00 PM GMT+8
ကောင်းလိုက်တဲ့ စာမူလေး အမချစ်ကြည်အေးရေ...၊ ဘီအက်စ်စီ မုန့်ဟင်းခါး သည်လေးရဲ့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ဖြတ်သန်းမှုလေးကို ဖတ်ရတာ အနားမှာ လာထိုင်ပြီး ပြောနေသလိုပဲ..၊
ဟိုတစ်ခါ ပို့စ်တစ်ပုဒ်မှာ အမချစ်ကြည်အေးက ဇတ်ကောင်တွေနေရာမှာ ကျမက ဝင်,ဝင်ပါသွားလို့ အားမရဘူးလို့ နှိမ့်နှိမ့်ချချ ရေးခဲ့သေးတယ်၊ ဒီမှာတော့ ကျနော်မြင်တာ ‘စန္ဒာမြင့်’ ပဲ၊ ‘ချစ်ကြည်အေး’ ကို လုံးဝ မတွေ့ပါဘူးဗျာ...။း)
MG THANT Tue Sep 11, 08:19:00 PM GMT+8
ပုံနှိပ်ထဲမှာ ဖတ်ချင်လိုက်တာ တီတီချစ်... နောင်တ ဆိုတာ မောဟ တွေရဲ့ အနာဂါတ်ဆိုတာ လူတွေက အချိန်နှောင်းမှ သိတတ်ကြတယ်...
ဒီလို စာမျိုးတွေ မြောက်မြားစွာ ထပ်ဖတ်ချင်တယ်... :)
အညာမြေ အရှင်သုမန(ရွှေပင်မြေ) Thu Sep 13, 05:02:00 PM GMT+8
An Asian Tour Operator Sat Sep 15, 04:43:00 PM GMT+8
ပတ်ဝန်းကျင်မှ ကြုံလေ့ရှိတတ်တဲ့ ဖြစ်ရပ်လေးတွေက အစ်မချစ်လက်ရာ နဲ့ ၀တ္တုတို ကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်သွားပြီ။ ရသ နဲ့ အတူသံဝေဂ လဲယူစရာ ပါသေးတယ်။
ညိုလေးနေ Wed Sep 19, 09:41:00 PM GMT+8
ဖတ်ရင်းနဲ့ အဖိုးကိုတောင် သတိရလာတယ်
ရိုးမြေကျ Tue Sep 25, 02:21:00 PM GMT+8
မနေ့ကငှားဖတ်တဲ့ မဟေသီမဂ္ဂဇင်းထဲမှာ အစ်မ၀တ္ထုလေးတွေ့လိုက်ရတာ။ ချစ်ကြည်အေးဆိုတော့ နာမည်တူများလားလို့ ဒီနေ့မှအတူတူပဲဆိုတာ ပိုသေချာသွားတယ်အစ်မ။
san htun Sun Sep 30, 03:25:00 AM GMT+8
ကောင်းလိုက်တယ့်ပို့ စ်လေး မမချစ်..လူ့ လောကရဲ့မောဟတွေ၊ လူ့ စိတ်တွေကို အကောင်းဆုံး ပုံဖော်သွားနိုင်တယ်..thumbs up..